Tizen Studio 4.5 inouya nerutsigiro rweTizen 6.5, TIDL mutauro nezvimwe | Linux Addicts
Tizen Studio 4.5 inouya nerutsigiro rweTizen 6.5, TIDL mutauro nezvimwe
Darkcrizt | 31/10/2021 20:07 | Free Software
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kwe iyo itsva vhezheni yenzvimbo yekuvandudza Tizen Studio 4.5 iyo yakatsiva iyo Tizen SDK uye inopa seti yezvishandiso zvekugadzira, kuvaka, kugadzirisa, uye kunyora nharembozha uchishandisa iyo Webhu API uye yemuno Tizen API.
Nzvimbo Iyo yakavakirwa pahwaro hweiyo yazvino vhezheni yeEclipse papuratifomu, Iyo ine modular architecture uye panguva yekuisa nhanho kana kuburikidza neyakakosha package maneja inobvumidza iwe kuisa chete inodiwa mashandiro.
Kune avo vasingazive TizenOS, vanofanira kuziva kuti es a purojekiti iri kuvandudzwa pasi pehurongwa hweLinux Foundation, nguva pfupi yadarika neSamsung. Tizen yakavakirwa paSamsung's Linux papuratifomu (Samsung Linux Platform - SLP), referensi yekumisikidza yakavakirwa muLiMo.
Icho chirongwa chaive yakatanga kubatwa seHTML5-yakavakirwa chikuva chemafoni nhare kubudirira muMeeGo. Samsung yakabatanidza yayo yapfuura Linux-based operating system kuyedza, Bada, kupinda muTize, uye kubvira ipapo yaishandisa zvakanyanya pamapuratifomu akadai semidziyo inochengetwa nemaTV akangwara.
Tizen Studio inosanganisira seti ye emulators yeTizen-based zvishandiso (emulator ye smartphone, TV, smart watch), seti yemienzaniso yekudzidziswa, maturusi ekugadzira maapplication muC / C ++ uye kushandiswa kwewebhu tekinoroji, zvikamu zvekutsigira mapuratifomu matsva, masisitimu mashandisirwo uye vatyairi, zvishandiso zvekugadzira maapplication. yeTizen RT (yakasiyana yeTizen yakavakirwa paRTOS kernel), maturusi ekugadzira maapplication emawachi akangwara uye terevhizheni.
Hunhu hutsva hutsva hweTizen Studio 4.5
Chimwe chezvakakosha zveshanduro itsva yeTizen Studio 4.5 ndiyo yakawedzera rutsigiro rweTizen 6.5 papuratifomu, pamusoro pekushandiswa kwe tsigiro yemutauro weTIDL, iyo inobvumira kutsanangura nzvimbo dzekuchinjana data pakati pezvikumbiro uye inopa nzira dzekugadzira RPC (Remote Procedure Call) uye RMI (Remote Method Invocation).
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti itsva yekuraira mutsara interface yakatsanangurwa, yakagadzirwa se "tz" utility, iyo inokutendera iwe kugadzira, kuvaka, uye kuita mapurojekiti anoenderana.
Yakawedzerawo tsigiro yemapakeji ezvimwe zviwanikwa zvinoshandiswa mukushandisa (resource type package) uye mvumo yakaparadzana yakaitwa kubvumidza kuisirwa zvikumbiro.
Kune rimwe divi, ma-add-on eVSCode neVisual Studio akawedzera maturusi ekugadzira emuno uye ewebhu maapplication eTizen.
Nezvematambudziko anozivikanwa, zvinonzi:
Kana muchina wekutambira ukashandisa tekinoroji yeNVIDIA® Optimus® paUbuntu kana Windows, unofanira kugadzirisa Tizen emulator kuti imhanye nekadhi rako remifananidzo reNVIDIA®. Kune Ubuntu, tarisa bumblebee chirongwa. YeWindows, sarudza NVIDIA® High Speed ​​​​Processor seInofarirwa Graphics processor muNVIDIA® Control Panel.
MuUbuntu, kana mutyairi wemifananidzo apera, yako Ubuntu desktop sesheni inombobviswa kana uchitanga Emulator Maneja, kana ganda remulator rinoratidzwa zvisizvo. Tarisa zvinotarisirwa uye gadziridza kune ichangoburwa mifananidzo mutyairi.
Paunotanga Emulator Maneja muTizen IDE, mufananidzo wekudimbudzira weEmulator Manager unogona kusaratidza zvakanaka.
Basic web applications hazvina kuiswa paSD card.
Kuti ushandise Tizen Emulator paTizen 3.0 papuratifomu kana kudzika, dzima iyo CPU VT sarudzo muHW Tsigiro tab yeEmulator Configuration.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni itsva yakaburitswa, unogona kutarisa runyorwa ruzere rwekuchinja mu inotevera chinongedzo.
Kana vari avo vanofarira kukwanisa kuwana Tizen Studio, vanogona kudhawunirodha nyowani vhezheni kubva pane inotevera link. Pamusoro peiyo mune iyi link iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve kuisirwa uye kushandiswa kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Tizen Studio 4.5 inouya nerutsigiro rweTizen 6.5, TIDL mutauro nezvimwe
Microsoft Edge yeLinux. Zvandinoda nezvandisingadi
MacOS zvirongwa paLinux? NaDarling zvinogoneka.